Jesus Fellowship Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 24
Nepali New Revised Version, Ezekiel 24
1 नवौँ वर्षको दशौँ महिनाको दशौँ दिनमा परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
2 “हे मानिसको छोरो, आजको दिन, आजकै मिति लेखिराख्‌, किनभने आजकै दिन बेबिलोनको राजाले यरूशलेमलाई घेरा हालेको छ।
3 यस बागी घरानालाई यो उखान कहेर तिनीहरूलाई भन्‌: ‘परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ: ‘आगोमाथि भाँड़ो राख्‌, भाँड़ो राख्‌, र त्‍यसमा पानी हाल्‌।
4 त्‍यसमा मासुका टुक्राहरू हाल्‌, सबै असल-असल टुक्राहरू– खुट्टा र कुम, ती असल-असल हड्डीहरूले त्‍यो पूरा भर्‌।
5 बगालको सबैभन्‍दा असल पशु छानेर ले, हड्डीका निम्‍ति त्‍यसमुनि दाउराको थुप्रो लगा। उमालेर त्‍यसमा हड्डीहरूलाई पका।
6 “किनकि परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “ ‘यस खूनी सहरलाई धिक्‍कार! त्‍यो थिग्रो लागेको भाँड़ालाई, जसको थिग्रो त्‍यसबाट गएको छैन! तिनमा चिट्ठा नहाली टुक्रा-टुक्रा गरी त्‍यसलाई रित्तो पार्‌।
7 “ ‘किनकि त्‍यसले बगाएको रगत त्‍यसकै बीचमा छ। त्‍यसले त्‍यो रगत नाङ्गो चट्टानमा बगायो, धूलाले ढाक्‍नलाई त्‍यसले त्‍यो रगत भूइँमा पोखाएन।
8 क्रोध जगाएर साटो लिनलाई त्‍यसले बगाएको रगत नढाकोस्‌ भनेर मैले नाङ्गो चट्टानमा त्‍यो राखें’।
9 “ ‘यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “ ‘धिक्‍कार, त्‍यस खूनी सहरलाई! म पनि दाउरा थुपार्नेछु।
10 यसैले दाउरा थुपार्‌ र आगो सल्‍का। मसला हालेर मासु राम्ररी पका, र हड्डीहरू डढून्‌।
11 त्‍यसपछि भाँड़ो खाली गरेर आगोमाथि राख्‌ र त्‍यो गरम होस्‌, र त्‍यसको तामा चम्‍कोस्‌। र त्‍यस भित्रको मैला गलिजाओस्‌, र त्‍यसको थिग्रो डढ़ेर जाओस्‌।
12 त्‍यसले गर्दा सबै परिश्रम व्‍यर्थै भयो। त्‍यसको बाक्‍लो थिग्रो आगोले पनि जाँदैजाँदैन।
13 “ ‘तेरो थिग्रोचाहिँ कामवासना हो। मैले त तँलाई शुद्ध गर्ने कोशिश गरें, तर तेरो अशुद्धताबाट शुद्ध हुन तैंले मानिनस्‌। यसकारण जबसम्‍म म आफ्‍नो क्रोध तेरो विरुद्धमा पोखाएर सन्‍तुष्‍ट हुन्‍नँ, तबसम्‍म तँ फेरि शुद्ध पारिनेछैनस्‌।
14 “ ‘म परमप्रभुले यो कुरा बोलेको हुँ। मैले काम गर्ने समय आएको छ। म पछि हट्‌नेछैनँ। म दया देखाउनेछैनँ। न त म पछितो गर्नेछु। तेरै चालचलन र तेरै कामअनुसार म तेरो न्‍याय गर्नेछु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।
15 परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
16 “हे मानिसको छोरो, एकै प्रहारमा म तँबाट तेरो आँखाको नानीलाई लैजान लागेको छु। तापनि तैंले शोक नगर्‌। नरो, र तेरा आँखाबाट केही आँसु नझार्‌।
17 चूपचाप बसेर सुस्‍केरा हाल्‌। मृतकको निम्‍ति शोक नगर्‌। टाउकोमा फेटा र खुट्टामा जुत्ता लगा। तेरो मुख नछोप्‌। मलामीहरूको खाने कुरा नखा।”
18 यसैले बिहानै मैले यो कुरा मानिसहरूलाई भनें, र त्‍यही बेलुकी मेरी पत्‍नीको मृत्‍यु भयो। भोलि बिहान मैले जे आज्ञा पाएको थिएँ, त्‍यसै गरें।
19 तब मानिसहरूले मलाई सोधे, “यी कामहरूसँग हाम्रो के सम्‍बन्‍ध? के तपाईं हामीलाई बताउनुहुन्‍न?”
20 तब मैले तिनीहरूलाई भनें, “परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
21 इस्राएलको घरानालाई भन्‌: “परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: म मेरो पवित्रस्‍थान, त्‍यो किल्‍ला, जसमा तिमीहरू गर्व गर्दछौ, तिमीहरूका आँखाको प्‍यारो, तिमीहरूका प्रेमको पात्रलाई अपवित्र तुल्‍याउन लागेको छु। अनि तिमीहरूले छोड़िराखेका तिमीहरूका छोराछोरीहरू तरवारले मारिनेछन्‌।
22 अनि मैले गरेझैँ तिमीहरूले पनि गर्नेछौ। तिमीहरूले आफ्‍नो मुख छोप्‍नेछैनौ, अथवा मलामीहरूको खानेकुरा तिमीहरूले खानेछैनौ।
23 तिमीहरूले आफ्‍नो फेटा टाउकोमा र तिमीहरूका जुत्ता तिमीहरूका खुट्टामा लगाउनेछौ। तिमीहरूले शोक गर्नेछैनौ न त रुनेछौ, तर तिमीहरू आफ्‍ना पापहरूको कारण सुकेर जानेछौ, र आ-आफ्‍ना बीचमा सुस्‍केरा हाल्‍नेछौ।
24 यसरी इजकिएल तिमीहरूका निम्‍ति एउटा चिन्‍ह हुनेछ। उसले गरेजस्‍तै तिमीहरूले पनि गर्नेछौ। जब यो कुरा हुन्‍छ, तब परमप्रभु परमेश्‍वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्‍नेछौ।”
25 “हे मानिसको छोरो, त्‍यस दिन जब म तिनीहरूबाट तिनीहरूको किल्‍ला, तिनीहरूको आनन्‍द र गौरव, तिनीहरूका आँखाको अति प्रिय कुरा, तिनीहरूका हृदयको इच्‍छा र तिनीहरूका छोराछोरीहरू पनि लानेछु,
26 त्‍यस दिन तँलाई यो समाचार सुनाउनलाई एउटा भागेर आएको मानिस तँकहाँ आउनेछ।
27 त्‍यस बेला तेरो मुख खोलिनेछ। तँ त्‍यससँग कुरा गर्नेछस्‌, र तँ चूपचाप रहनेछैनस्‌। यसरी तँ तिनीहरूका निम्‍ति एउटा चिन्‍ह हुनेछस्‌, र तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछन्‌।”
Ezekiel 23 Choose Book & Chapter Ezekiel 25